Bazobe beshiyelana inkundla kowomasikandi | News24
Bazobe beshiyelana inkundla kowomasikandi
ISIHTOMBE:SITHUNYELWE Umculi kamasikandi uThokozani Langa uzobe engomunye ozobe enandisa enkundleni yezemidlalo i-Moses Mabhida kwindumezulu yo mcimbi womasikandi
BAZOBE besina bededelana abaculi bomasikandi ngoMfumfu (Okthoba) enkundleni yezemidlalo i-Moses Mabhida eThekwini.
Lokhu kuzokwenzeka emva kokuba sekujikelezwe amahositela ezindaweni eziningi khonalapha e-KZN, lapho amaqembu amasikandi esuke edlana imilala eqhudelana ukuze athole ithuba lokuba nawo anandise kulo mcimbi omkhulukazi.
Ngokusho kukaMnu Sabelo Shabalala ongumhleli wawo lo mcimbi ozoba ziyi-10 kuMfumfu, leli khonsathi lenzeka minyaka yonke kanti futhi kuzobe sekuyisiwombe seshumi (10) lo mcimbi wenzeka kulo nyaka.
Okunye okuzohlaba umxhwele izibukeli nabathandi bomculo kamasikandi ukubona okukuqala iqembu la Mageza Amahle lizobe inandisa okukuqala ngaphandle kuka Mtshengiseni Gcwensa owaziwa ngele Ndidane. Leli qembu lizobe liholwa uPotso Ngobese obengumculi obelekelela kulo leli qembu ngesikhathi Indidane isadla anhlamvana.
Kuzokhumbuleka ukuthi Indidane idlule emhlabeni esibhedlela saseDundee ngenyanga kaNtulikazi emva kokubangwa nezibi isikhathi eside. Ufihlwe ekhaya lapho engumnsinsi wokuzimilela khona eMsinga.
Eqhuba uShabalala uthe okuye kwenzeke, bahambela amahositela wonke lapho kuba khona amaqembu aqhudelanayo.
“Amaqembu ayaqhudelana kuze kufike esigabeni lapho kusala amaqembu amathutha kuphela. La maqembu amathathu aye athole ithuba lokukwazi ukuthi nawo abe ngamanye amaqembu azonandisa kule ndumezulu yomcimbi,” kusho yena.
Oyimenenja yeqembu la Mageza uMnu Alpha Nxumalo uthe uyakuqinisekisa ukuthi leli qembu libuye ngezinkani kanti futhi wathi osezolihola leli qembu le-Ndidane nguye uNgobese.
“Amageza azophinde akhiphe icwecwe lawo ngo Zibandlela,” kusho uNxumalo.
Abaculi abazobe benandisa kule khosathi uShwi NoMtekhala, Khuzani Mpungose, Mj ikijelwa, Ichwane Lebhaca, Imfezemnyama, AmaSAP, Qhoshangokwenzakwakhe, Ngelo V, Osaziwayo, Thokozani Langa, Buselaphi, Umajotha, Igcokama Elisha, Mathelente, Sgwebo Sentambo, Ithwasa Lekhansela.
Abasakazi abazobe bephethe uhlelo futhi beyingxenye yalo mcimbi, abasakazi boKhozi FM oNgizwe “ Zulu Charmer” Mchunu noBheka Mchunu nomsakazi we Zululand FM uNonhlanhla “ Mdonso” Ngcobo.
Amathikithi ayatholakala e-Computicket naseShoprite/ Checkers ngo-R100 ngalinye